Thatha ithuba lokupakisha ekhaya | IBezzia
UMaria vazquez | 17/09/2021 18:00 | Yenze ngokwakho
Kwabo banandipha ukuthunga njengomsebenzi wokuzonwabisa, igama elithi patchwork ekhaya aliyi kuba yinto engaqhelekanga kuwe. Kwaye akunjalo, mhlawumbi, igama elingaziwa kwabanye. Kwaye yile patchwork, njengoko benzile bonke ubugcisa bemveli, ndaphinda ndaduma kwiminyaka embalwa eyadlulayo.
Bobabini abo banobuchule ngenaliti, njengabo bafuna ukufunda indlela yokuyisebenzisa, kunye nabo bangenamdla wokufunda kodwa bexabisa izinto ezenziwe ngesandla ngendlela yobugcisa, namhlanje siphakamisa ezinye izimvo kuni . thatha ithuba lokupakisha ekhaya. Ukwenza ikhaya lakho libe nomtsalane ngakumbi kwaye lisamkele ngezi ziqwenga.
1 Yintoni i-patchwork?
2 Sebenzisa i-patchwork ukuhombisa indlu yakho
2.1 Nxibisa ibhedi nesingqengqelo
2.2 Hombisa iindonga
2.3 Yenza izinto ezahlukeneyo
Kwimpahla elukiweyo, "i-patchwork" sisiqwenga esilukiweyo esifunyenwe kumdibaniso wamaqhekeza amanye amanye amalaphu. Ibinzana lesiNgesi eliza kuthatha indawo yeligama elijikelezwe kwindawo yaseLa Rioja lalisetyenziselwa ukubhekisa kwinto enye kwaye yiAlmazuela.
Isidingo, ngaphezulu kwebango lobugcisa, sikhokelele ekusetyenzisweni kwale ndlela yobugcisa. Ngapha koko, wafumana amava Ukukhula okukhulu ngexesha loxinzelelo olukhulu, xa ubuhlwempu bunyanzela abasetyhini abaninzi ukuba baphinde basebenzise amalaphu abo amadala ukuze babanike usetyenziso olutsha, ngohlobo lokulala okanye impahla.
Ngobu buchule okanye iqela lobuchule, iingubo, iitaphethi, izinto zasekhaya kunye nempahla kunye nezinto ezinokwenziwa zinokwenziwa. Namhlanje apho sonke sazi malunga ne ukusetyenziswa ngokufanelekileyo kunye nozinzo, i-patchwork sisixhobo esihle se nika amalaphu ubomi besibini.
Sebenzisa i-patchwork ukuhombisa indlu yakho
Singayisebenzisa njani i-patchwork ekhaya? Iingqengqelo mhlawumbi zezona ziqwenga zithandwayo. Zilungele ukuhombisa igumbi lokulala lendlela ye-bohemian kunye neendawo zabantwana. Kodwa zikho ezinye iindlela zokuhombisa ikhaya lethu ngezi zinto kunye nezinye ezininzi esinokuzisebenzisa.
Nxibisa ibhedi nesingqengqelo
Iipatchwork iibhedi zokulala zixabiseke kakhulu. Kwaye asithethi nje kuphela ngexabiso layo lezoqoqosho, esingasokuze sibuze ngalo ngokunikwa inani leeyure zomsebenzi ezifunekayo kuyilo olwenziwe ngokusikwa okuncinci. Sikwathetha ngexabiso layo lobuhle, kuba i-patchwork quilt iyakwazi ukuzalisa indawo ngokwayo, iyinike isitayile se-bohemian kunye nesothando ayinakuphikiswa.
Iingqengqelo zokubekwa kumacangci amancinci lukhetho olukhulu lokusebenzisa njengengubo esofeni. Nangona ufuna ukuhombisa ezi ngento eyenziwe ngezandla zakho, kusenokwenzeka ukuba kusengqiqweni ngakumbi ukuqala nge ngokwenza imithwalo.
Ukuba iindonga zekhaya lakho azikho kwimeko entle okanye zibanda kakhulu, iibhedi ezisasazwayo zingasisisombululo sokunxiba zona. Zihombise iindonga ngeebhedi ezifakwe kwizakhelo Ayixhaphazwa kakhulu, ke baya kunika umnqweno wokuqala kubo. Kwaye ngombala, khawuthelekelele kubo eludongeni olukhulu olumhlophe!
Ukuba awunabuganga kunye nabo, unokwenza iiflegi ku tsalela ingqalelo kuyo nayiphi na ikona. Beka kwiseti yesithathu okanye yesine kwisinxibo okanye udityaniswe nezinye izinto eziphendula kwiintetho ezahlukeneyo zobugcisa.
Yenza izinto ezahlukeneyo
Ngendlela efanayo xa usenza iibhedi okanye iziqhushumbisi kodwa ngendlela elula unokwenza izinto ezincinci ezintle kwaye ziyasebenza. Sithetha ngayo Iikiti zangasese zokulungisa izinto zokuthambisa okanye iipeyinti, iimittts ze-oveni, iitrivethi okanye iibhasikithi zezinto zokudlala okanye izinto zokuthunga.
Siyayithanda nembono ye- Yenza iimbotyi usebenzisa obu buchule. Kwaye yile lo mncedisi ubhetyebhetye kakhulu. Ingasebenza njengesihlalo esongezelelweyo xa uneendwendwe okanye itafile esecaleni ukushiya incwadi, kodwa ikwangumbonisi ogqibeleleyo kumagumbi okulala abantwana ukwenza ikona yokufunda okanye ikona yemidlalo.
Ezi zezinye zeendlela ezininzi esinazo zokubandakanya i-patchwork ekhaya. Ukuba uyayithanda le ndlela kwaye uyathanda ukusebenza nayo, imida ibekwe nguwe kunye nobuchule bakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Yenze ngokwakho » Thatha ithuba lokupakisha ekhaya